दुई सय २० जना सांसदले पाए निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र, काँग्रेसका बलदेश शर्मा सबैभन्दा बुढा सांसद ! | suryakhabar.com
Home राजनीति दुई सय २० जना सांसदले पाए निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र, काँग्रेसका बलदेश शर्मा सबैभन्दा बुढा सांसद !
दुई सय २० जना सांसदले पाए निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र, काँग्रेसका बलदेश शर्मा सबैभन्दा बुढा सांसद !
on: January 19, 2018 In: राजनीतिTags: काँग्रेसका बलदेश शर्मा सबैभन्दा बुढा सांसद !, दुई सय २० जना सांसदले पाए निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रNo Comments
काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सदस्यलाई आज निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।
आयोगको प्राङ्गणमा आज आयोजित समारोहमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले उनीहरुलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् ।
प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा ४८ पुरुष र १७२ महिला गरी २सय२० जना निर्वाचित भएका हुन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचिन अधिकृतमा निर्वाचन आयोगका सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौड्याल छन् ।
उक्त निर्वाचनबाट प्रदेशसभा सदस्यमा विभिन्न राजनीतिक दलका ६९ आदिवासी जनजाति, ६६ खस आर्य, १२ थारु, २९ दलित, ३७ मधेसी र सात मुसलमान उम्मेदवार विजयी भए । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ४१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए ।
त्यस्तै, यो निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा अपाङ्गता भएका चार, अल्पसंख्यक समुदायका १७ र पिछडिएका क्षेत्रका १२ जनाको प्रतिनिधित्व भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
पाँच सय ५० सदस्यीय प्रदेशसभा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २२० जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यमा सबैभन्दा कान्छी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सिर्जना सैँजू हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी उम्मेरका नेपाली काँग्रेसका बलदेश शर्मा पोखरेल ७८ वर्षका निर्वाचित भए ।
समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा प्रदेश नं १ बाट ३७, प्रदेश नं २ बाट ४३, प्रदेश नं ३ बाट ४४, प्रदेश नं ४ बाट २४, प्रदेश नं ५ बाट ३५, प्रदेश नं ६ बाट २१ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यको व्यवस्था भएअनुसार नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिको चयन भएको हो ।
Tags: काँग्रेसका बलदेश शर्मा सबैभन्दा बुढा सांसद !दुई सय २० जना सांसदले पाए निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र
भारतको दादागिरीप्रति तरुण दल आक्रोशित, जंगे पिलर हटाउन सरकारसँग माग
चिनियाँ एयरलाइन्समा जहाजभित्रै वाईफाई